Iimpawu zokuzilungisa zononophelo
Ukukhetha iimveliso zonyango zokunyamekela, ukhethe okukhethwa kuzo izimonyo zokunakekelwa kwesikhumba. Kuye kwacaca kwexesha elide ukuba iziqholo ezifanelekileyo zononophelo zesikhumba zinceda nayiphi na ibhinqa ukuba yithembele kwaye ngexesha elifanayo libukeka likhulu.
Iintsimbi - hayi!
Usuku nobusuku ama-creams avela kumabhodlela anemilinganiselo emnandi, ayifumene kakuhle, anike isikhumba ukukhanya kunye nokuthuthuzela. Kubandakanywa kwi-vitamin A, amaqhotyoshelweyo eeprotheni ze-soy kunye nee-peas ezihlaza zihlaziye kwaye zihlaziye ulusu. Futhi i-serum ebomvu ikhusela ukubonakala kwemibono emitsha, iphucula i-tone yesikhumba, inika umbukiso onempilo nokutsha. Usuku lweMigodi (ACTIVE) (i-50 ml, i-$ 23), i-Mineral ACTIVE Night (50 ml, i-$ 24), i-Mineral ACTIVE Serum (30 ml, i-25) ukusuka kwi-Natural Sea Beauty.
I-new elixir ebusweni ebusweni ine-high concentration ye-hyaluronic acid, eyenza ukuba izihlandlo eziliqela ziphumelele kunanaluphi ukhilimu. Emva kweeveki ezi-3 zesicelo, iimbombo zizaliswa ngaphakathi, kwaye ulusu lukhangeleka lula kwaye lutsha. Anew Clinical Derma-Ngokugcwele kwiAvon (30 ml, $ 27).
I-Lipstick - iziqholo ezifanelekileyo zokunakekelwa kwesikhumba, zenziwe ngegolide e-24-carat ecocekileyo. Isetyenziswe emlonyeni ngokunyakaza okulula, ukushiya amaqabunga egolide agqabileyo phezu kwabo kwaye kubanika ukukhanya okumangalisayo. Unika umlomo umbala ojulileyo nobutyebi. "Ii-carats zegolide" ezivela kwiAvon (iRandi 8).
I-Shampoo kunye ne-balm isuka kuqokelelo lwe "Sequins of laughter" - yenza izinwele zakho zivule ngovuyo! I-Shampoo iya kubanika ukukhanya komlingo, kunye nokuhlambulula i-balm, ukulungisa umonakalo oqhaqhaqhayo, kuya kwenza u-silky kwaye uthobele. Uqoqo lwe "Sequins of Raughter" (i-shampoo - 250 ml, i-$ 3, i-conditioner ye-balm - 250 ml, i-$ 4) kwi-Essential Essences.
I-mineral deodorant, ebonelela ngokukhuselekileyo ngokukhupha kunye nokuvumba kwamahora angama-48 ithathwa njengeziqholo ezifanelekileyo zokunakekelwa kwesikhumba. Yaye indlela yakhe ekhethekileyo ivimbela ukubonakala kweendlela ezimhlophe kwiingubo. I-Mineral Deodorant esuka kwi-Garnier (50 ml, i-$ 3).
Enye imbiza iqukethe i-gel face refreshing face gel, ehlanjululwa ngokugqithiseleyo i-pores ye-sebum eyimfuneko, ibuyisela isikhumba. Kwaye i-gel egcwala i-kelesi-gel, ekhupha ngokukhawuleza ukwakheka, iyancwitshisa kwaye iyanciphisa isikhumba. Kwaye kwelinye - usuku olujongene nekhilimu ngokukhusela i-SPF 15, egcwalisa ulusu ngomswakama, lukhusela kwimpembelelo engalunganga yendalo. Kwaye kunye nekhilimu yobusuku ekhusela ukungcola kwesikhumba, okwenza kube lula kunye nokuthobeka. Ubuso beSisombululo esicocekileyo Ubuninzi obuninzi (100 ml, i-$ 4), Ubuso beZisombululo zokuSusa (i-9) ukusuka e-Avon.
Ukuze ube ngumzimba ococekileyo
I-Soap-peeling yomzimba iqulethe iincinci ezihlambululayo kwaye zivuselele isikhumba, kunye ne-almond kunye ne-avocado oils, enokunyusa ukunyusa. I-salt scrub ikhupha iincinci zesikhumba ezifile, zenza ithenda kunye nefuthe. I-krimu yomzimba iqinisa kwaye ilukhumbule isikhumba, inike i-flavour ekhethekileyo. I-Body Peeling Soap (400 ml, i-$ 10), i-Salt Scrub (i-280 g, i-$ 7), i-Shea Body Cream (360 ml, i-$ 10) ukusuka kwi-Spa yamaRoma.
Pamper isikhumba sakho nge-sweetie kunye nokuqinisa ukhilimu womzimba kwi-series honey. Ilula ngokukhawuleza, isondla ngokunyanisekileyo kwaye igxinise isikhumba, sinika ubumnandi kunye nokunyaniseka. I-Honey Miel yokuQinisekisa iCream evela kwi-Perlier (200 ml, i-$ 35).
Isalathiso esilindelwe ixesha elide - iVenus Yamukela i-razor ngokudibanisa ne-Satin Care Avocado Twist shaving shael - iya kunika imilenze epholileyo. Iinqaba ezinhlanu ezilucebileyo, zijikelezwe ngumtya wokuba ulunge ngakumbi kwesikhumba, ngokuphumelelayo kodwa ngokunyanisekileyo wenze imilenze ibe lula njengesilika. I-gel yokwenza icazi ithathwa njengeziqholo ezifanelekileyo zononophelo lwesikhumba, kuba uya kuyinyamekela ulusu ngexesha lokukhutshwa kweenwele kwaye uya kunika i-softness and silky. Eli qabane eligqibeleleyo - i-razor kunye ne-gel, eyenzelwe ngokukodwa ukunyamekela imilenze yakho! I-Venus Yamkela (i-$ 10), i-Satin Care Avocado Twist (200 ml, i-$ 3) esuka eGillette.
Indlela yokukhetha ilanga
Imimoya evuselela abafazi
Izixhobo zokukhetha iindlela zokunyamekela ubuso
Iimpembelelo zezivumba kwimpilo nobudlelwane
Iimpawu zinyaniso ukuba umntu uphoswa
Indlela yokutya ngokufanelekileyo nesifo sesibindi?
Uhlalutya ama-hormone ngexesha lokukhulelwa
Ikhekhe elimnandi ngoMatshi 8
Iiklabishi "I-Novinka" kunye neklabishi yeSavoy
Ukuzalwa kukaMariya oyiNtombi-Intsikelelo - yintoni umhla ngo-2016 ngumhla. Imbali, iimpawu kunye nemithandazo yeholide yeholide
Isibikezelo seenkwenkwezi nge-2010 ngeCapricorn
I-pancake yesibindi kunye nelayisi
Ukunyanya ngokweprayimari - i-etiology kunye ne-pathogenesis
Ukukhuselwa kwesikhumba esinamafutha ukusuka elangeni